Firefox 93 yakagonesa kutsigira iyo AVIF | Linux Vakapindwa muropa
Vakanga vachichiyedza kwemwedzi, asi vasingakwanise kuzviunzira kuti vaiise mune yakagadzikana vhezheni. Kusvika zuro. Mozilla yakakanda Firefox 93, uye hutsva hwakatanhamara, hwaitarisirwa ye v92 kana kumberi, kwave kuri kutsigirwa kweAVIF mifananidzo. Iyo fomati iyo inogona kuchengeta imwechete mifananidzo kana kuteedzana kwakamanikidzwa neAV1 yeHEIF fomati. Chingatifadze zvakanyanya kana chinotsanangura zviri nani kukosha kwayo ndechekuti fomati inopa hukuru hwakakura muhukuru / kurema kushoma, kuitira kuti webhu iratidzike zvirinani isingareme.
Tsigiro yeAVIF ndiyo inosimbisa ye runyora rwemashoko kuti mwedzi uno hauna kupenya zvakanyanya. Kamwe zvakare, uye izvi zvatoita senge tsika, vatora iyo nguva yekuvandudza zvakavanzika zvebrowser, uye Firefox 93 inosvika neyakavandudzwa webhu inoenderana yekuchengetedza zvakavanzika ne SmartBlock 3.0.
Zvimwe zvinhu zvitsva muFirefox 93
Firefox ikozvino inotsigira iyo itsva AVIF fomati fomati, iyo inoenderana neazvino, copyright-isina AV1 vhidhiyo codec. Iyo inopa yakakosha bandwidth kuchengetedza kwemasaiti ichienzaniswa nemafomati emifananidzo aripo. Iyo inotsigirawo kujekesa uye zvimwe zvemberi maficha.
Pamusoro peizvo zvataurwa pamusoro, Firefox 93 muoni izvozvi anotsigira kuzadza mamwe mafomati, senge iwo akavakirwa paXFA, anoshandiswa zvakanyanya mumabhangi nehurumende. Pane rimwe divi, Windows vhezheni icha dhawunorodha matabhu kudzikisa ndangariro kushandiswa (uye ndozozvidzosera patsva patinovasarudza zvakare). Kuchengeta vashandisi veMacOS kubva pakurasikirwa nesangano ravo pavanotanga browser kubva kuDMG faira, ivo zvino vanozokurudzirwa kupedzisa kuisirwa. Uye kuenderera nekuchengeteka, kubva kuFirefox 93 kurodha pasi kunoenderana nekuchengetedzeka kubatana kuchadzivirirwa.
Firefox 93 inowanikwa kune ese masisitimu akatsigirwa kwemaawa anodarika makumi maviri nemana, saka ikozvino inogona kutorwa kubva yavo webhusaiti uye iri kutosvika kumahofisi epamutemo ezvakawanda zvekuparadzirwa kweLinux.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » Uye pakupedzisira, muFirefox 93 rutsigiro rwemhando yemifananidzo yeAVIF yakaitwa
Kuyedza mu manjaro uye for now inoshanda mushe. Kunyangwe ini ndikaiisa mune yapfuura posvo, mukushayikwa kwechizvarwa muturikiri mu firefox, ini ndinokurudzira iyo yekuwedzera Shandura peji rewebhu (Dudzira mapeji ewebhu) yemushandisi FILIPE PS, iyo (kunyangwe ikashandisa injini yekududzira yegoogle kana yandex ) inoshandura zvakazara peji rewebhu, ndiko kuti, kusiyana nevashanduri vemuno kana zvimwe zvinowedzerwa, semuenzaniso kana peji rewebhu riine mitauro yakati wandei, rinovashandura vese kamwechete uye rinoshandura zvirevo zvisina kufanira (izvo zvisingawanzo kududzirwa)